ကုမ္ပဏီ၏အစဉ်အဆက် - သာ။ ကွီးမွတျ
မူလစာမျက်နှာ>ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း >ကုမ္ပဏီ Profile ကို
ကျော် 25 အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း
ISO / TS16949 အသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်သူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဓိကအားဖြင့် foucson - စတစ်ကာများနှင့်တံဆိပ်များ၊ 3DEmblems & တံဆိပ်များ၊ Promo & အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သင့်အတွက်သီးသန့်စီစဉ်ထားသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် \_ t ကံမကောင်းစွာပဲဆန့်ကျင်ဘက်လည်းမှန်ကန်ပါတယ်။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းကသင်၏ထုတ်ကုန်များဟာအရည်အသွေးနိမ့်တယ်လို့ထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့နင့်ကိုချစ်နေမယ်။ ဒါပေမယ့် Ever Greater @ ကိုမင်းတို့ပြောရင်မင်းမှာတရုတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်ရေးပြonနာမရှိတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်စျေးနှုန်းကြီးကြီးမားမားပေးနိူင်မယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုထင်မှာလဲ။ မင်းတို့ "ဟုတ်တယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး" လို့ပြောမယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်။ ငါတို့ရဲ့လိုက်နာမှုတည်ဆောက်ပုံကိုချက်ချင်းကြည့်ပါ။ ၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောစာရင်းစစ်ဟုသင်ခေါ်ဆိုချင်တယ်။ သင်ကအခြားပံ့ပိုးသူနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ရင်တောင်ဒီစာရင်းကသင်ရှာတွေ့ဖို့ကူညီနိုင်သေးတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်
ISO / TF1 6949 လက်မှတ် - ဟုတ်ကဲ့!
PayPal ငွေပေးချေမှုကာကွယ်မှု -Yesi
အင်္ဂလိပ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - ဟုတ်ကဲ့!
ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီနမူနာ - ဟုတ်သည်!
သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက် - ဟုတ်ပါတယ်။
ဖောက်သည်လွှဲပြောင်းအကျိုးခံစားခွင့် - ဟုတ်သည်!
Ever Greater Solves သင်၏ဆက်သွယ်ရေးပြဇာတ်အားလုံးနှင့်သင့်ထံမှနာကျင်မှုကင်းမဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတရုတ်မှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
ရိုးသားပါ - အပိုမိုင်တစ်ခရီးကိုသွားရန်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကတိက ၀ တ်များသာထမ်းဆောင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မရနိုင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်နှင့်အတူရှေ့ပြေးနှင့်ရိုးသားပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အချိန်သို့မဟုတ်သင်၏ငွေကိုမဖြုန်းတီးပါ။ "ဟုတ်ကဲ့" ဟုပြောခြင်းကစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသော်လည်း၊ "မဟုတ်ပါ" သည်လည်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုရှိစေနိုင်သည်။ ရဗ္ဗိတစ်ချိန်ကပြောခဲ့သည့်အတိုင်း "သင်၏စကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်၊
ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါစေကျွန်တော်တို့ဟာအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တစ်ခါတစ်လေမှာကွဲပြားခြားနားဖို့လိုတယ်။ အတိတ်ကာလကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း၊ ဤနည်းလမ်းအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုရယူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိထုတ်ကုန်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်ပိုမိုလုံခြုံသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်မတူညီသောနည်းလမ်းများရှာဖွေနေသည်။
သမဝါယမဖြစ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အဓိကအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်များထံမှ opentoideas များဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးသိသည်ဟုမထင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားအမှန်အတိုင်းနားထောင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုအမြဲတမ်းဖျက်သိမ်းပြီးအကောင်းဆုံး ၀ ယ်ယူမှုကိုပေးနိုင်သည်။